🥇 ▷ Nokia 6.1 Plus waa rasmi: waa Nokia X6 oo leh Android One (sawir) ✅
Nokia 6.1 Plus waa rasmi: waa Nokia X6 oo leh Android One (sawir)
Waxay horey u daadatay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, laakiin hadda waa rasmi: Nokia 6.1 Plus jira. Xaqiiqdii waanu hore u aragnay, maadaama ficil ahaan uu yahay nooca caalamiga ah ee Nokia X6 horay loo shaaciyay, iyada oo farqiga kaliya ee softiweerku uu yahay: guddi aan helno run ahaantii Android 8.1 Oreo ku yaal Android One nooca.
Warka wuxuu toos uga yimaadaa websaydhka rasmiga ah ee Nokia (nooca Hong Kong). Sida ku xusan bogga go’an, nooca kaliya ee Nokia 6.1 Plus ee aan arki doonno wuxuu noqon doonaa 4 GB ee RAM + 64 GB ee xusuusta gudaha.
Kaliya in la soo koobo, waa kuwan Faahfaahinta farsamada:
Shaashadda: 5.8 “HD buuxa” (1.080 x 2.280 pixels) 19: 9 oo leh Gorilla Glass 3
processor: Qualcomm Snapdragon 636 oo leh Adreno 509 GPU
Xusuusta gudaha: 64 GB waa la fidin karaa (oo leh microSD illaa 256 GB)
Qalabka gadaal gadaal: 16 megapixels (RGB), f / 2.0, 1 μm cabir cabir + 5 megapixels (monochrome), f / 2.2, 1.2 μm cabir ahaan laba jibbaaran, dual tone LED flash.
Kaameerada hore: 16 megapixels, f / 2.0 apertures, 1 μm cabir dherer ah
Isku xirnaanta: hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Nooca-C, raadiyaha FM
cabirrada: 147.2 x 70.98 x 7.99 ~ 8.59 mm
Miisaan: 151 garaam
Bateriga: 3.060 mAh oo leh Lacag Deg deg ah 3.0
Nokia 6.1 Plus ayaa laga heli karaa Luulyo 24 qiime ahaan 2,288 HKD, ama € 249 halkii isbedel. Wax macluumaad ah kama hayno Talyaaniga, laakiin haddii ay yimaaddaan kama labalabeynno inaan kuu soo sheegno.
Dhanka: GSM ArenaXigasho: Nokia